Hukuru hwenyu mwari mubatsiri.
Hukuru hwenyu mwari mubatsiri
Mumashure mekupindira kwechivi, kwakaitawo murume mummwechete ane vakadzi vazhinji; zvaifamba nenzira iyoyo, mhuka yega yega, nevanhu nemuviri unoora ndewemhuka. Sungano yako ndeyekuti uchagara nemurume uyu kusvikira maparadzaniswa nerufu, zvisinei nekuti anotaridzika sei. Ipapo ndakatarisa kunzvimbo iyo, ndichifunga kuona maruva, asi handina kuona. Vamwe vanhu vanobva mumugwagwa vanouya kuzoona kuti uri kuita sei, asi chaizvo, wakanaka. Ndinoziva vasingatendi. Mwari mubatsiri wedu Lyrics - musixmatch. Nekuti murume asingatendi anonatswa nemukadzi wake, nemukadzi asingatendi anonatswawo nemurume wake: kumwe vana vanyu vaisava vakachena asi apa vave vatsvene.
Wanano neKurambana Chikamu 2
7 Nhau dzekutsanangura nharo dzekukunda yako Blog Readership WHSR
Panouya madzimambo ose kuzokupfugamirai ishe neniwo ndinoda kuwanikwa ndiripo. Panopupurwa hukuru hwenyu iniwo baba ndiwanwike mberi.
Mwari mubatsiri wangu · August 7, · Tinoziva imi muri Mwari uye hamukundikane. Nguva dzose Tigonewo kuratidza nyika hukuru hwenyu kubudikidza. Namabasa makuru, Akaitiwa nemi, Oseanorumbidza, Hukuru hwenyu mwari hunoshamisa kwazvo x2 Kanandarangarira, Mabasa okudenga.
Usangorondedzera zvinoitwa nemunhu mune nyaya yako, asi isa chinongedzo chikuru pane kwavo kukurudzira uye mazano kana uzivi hwebhizimusi izvo zvakavatungamira kuti vaite izvo zvavakaita. Nekuti tinoedza kuti varume vemunyika vararame nedzidziso yechiKristu, asi haukwanisi kuisa hunhu hwehwayana munguruve.
Munofunga here kuti hazvindiuraye kuti nditaure izvozvo?
Video: Hukuru hwenyu mwari mubatsiri ZAS Leicester Drop-in Centre - Hukuru Hwenyu Mwari
Pasi kuAfrica, pakati pehama dzangu ikoko, ndinowana hunhu hwevanhu ikoko huri pamusoro kukunda zvikamu makumi mapfumbamwe evanhu vekuno kuAmerica. Nzira imwe yavaifanira kuwanda pamweya yaive yekumirira kuti Mweya mutsvene ushanyire Eva kuti abereke Mwana Jesu ari mhandara.
Jesu ndiye Muti weHupenyu nekuti iye oga ndiye anopa Hupenyu husingaperi. Mwari aive akangwarira pazvinhu izvi.
Hukuru hwenyu mwari mubatsiri Varume nevakadzi vakanaka, vose vakasangana!
Zvino rangarirai, musati ndinotenda kubarika; handitendi mariri. MuTestamente Yekare, pasi pemurairo, murume anokwanisa kuita vakadzi vanodarika mumwechete. Hakuna chimwe chipuka panyika chakasikwa zvakadaro.
Zvakangofanana nemukomana, kana mukomana akavimbisa musikana kuti achamuroora, akatosungirirwa kumusikana iyeye. E … Haukwanisi kuva wakaroora kana kuroorwa pasina chibvumirano. Hamungaite kuti Shoko rinyebe.
Video: Hukuru hwenyu mwari mubatsiri MUMC Vabvuwi- Ndinoshamiswa kwazvo
Namabasa makuru. Akaiitiwa nemi, Ose anorumbidza. Ukuru hwenyu Mwari Hunoshamisa kwazvo.
Kana ndarangrira. Mabasa. Imi Mwari Ndimi Mwari Wangu Imi Mwari. Maria Muvirigo Mubatsiri Wedu. Mwari Imi Mune Hukuru. Ndichipfugamira Pauso Hwenyu Lyrics for Mwari mubatsiri wedu by Harare West M.U.M.C Namabasa makuru, Akaitiwa nemi, Oseanorumbidza, Hukuru hwenyu mwari hunoshamisa kwazvo.
Mune mamwe mazwi, usakanganwa vamwe vaverengi mukuedza kuzadzisa izvo zvinodiwa nemuverengi mumwe.
Zvino, zvinoreva pano, kwete Mubairo wekupedzisira wekuita uku ndewekuti unozivisa munhu wese azvarwa nenzira iyi, kuti achafa nerimwe remazuva. Ndakasungwa neShoko pabasa iroro. Kana akasadaro, ogara nemurume wake kwemakore gumi oreurura, ane mvumo yekumurasha owana mumwe mukadzi. Bonde rinounza chete hupenyu hwechinguvana.
Hukuru hwenyu mwari mubatsiri Nekuti tinoedza kuti varume vemunyika vararame nedzidziso yechiKristu, asi haukwanisi kuisa hunhu hwehwayana munguruve. Akauya kwandiri nemusikana waari kugara naye parizvino, muroora wangu.
Yeuka kuti niche muverengi anouya kubhulogi yako kune imwe chinangwa - kudzidza chimwe chinhu chitsva nezve niche yavo kana indasitiri, kuongorora maonero akasiyana nezveimwe nyaya, kana kugadzirisa dambudziko ravakatarisana naro izvozvi. Makanakidzwa norugave Mwanakomana wenyu Mwanakomana wenyu zvaainyaradza vane dam-budziko. Shandisa mafungiro ako - iwe unogona kuona zviri kuitika pamberi peziso rako here?
Achave ari mutsvene asina kubvira apomba, Mwenga weShoko!
One thought on “Hukuru hwenyu mwari mubatsiri”
Itai kuti naivowo vagozorumbidza tsitsi dzenyu huru kwemisi isingaperi.
21.05.2019 в 14:46
Ndiwo mubvunzo uri pamusoro pemoyo yevatendi. Jeradhi Mutsvene mudi wechokwadi waJesu ari musakaramende kwazvo reyukaristiya imi makapfugama nguva yakareba chaizvo pamberi petabhenakoro apo makaravira mifaro yeparadhiso.
27.05.2019 в 02:47
Unogona kushandisa a video-first approach kana message-first approach apo unosarudza kushandisa vhidhiyo senhau yekureva nyaya mumubhudzi wako wepa blog. Saka kana ukamuvimbisa, uofanira kumuroora.
Ndimi wekutanga pavadzidzi navatsvene vose. Bonde yaive nzira yemhuka chete kuti dziwande.
Iwe unogona sei kuchinja bhero yako yakasviba, inotyisa, inotyisa mumufananidzo kune unhu hupenyu, hwepakutanga, hunopenya iwe vaverengi vako vanoda uye izvo zvinonyatsoratidza iwe? Dhiyabhorosi yakanyanya, kushingaira kwakanyanya nevanhengo dzakasununguka zvikuru kuti vawane kukosha kwechokwadi kumapuranga.
Gf tangit m3000 hand
Cm yield optimizer
Freccia alata plus upgrade vista
Odie the fat wiener dog obie